Echiche nke Atọ - Bomụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Atọ nke Atọ nkezi 3.9 / 5 si 15
NA / A, o nwere ihe nlere 61.3K
Drama, Manhwa, Ọkà mmụta, romance, Weebụ, Yaoi
Na-ezochi n'azụ ọchị iji lanarị ezinụlọ ya nwere obi ọjọọ ma na-egbochi ndụ kọleji, Kwon Hyeon na-emikpu na nchekasị na obi nkoropụ. Ọ dịghị ka ọ họọrọ ka a mụọ ya n'ime ego, mana n'agbata nna ya chọrọ ịkwado aha ezinaụlọ ya na asịrị ụmụ klas ya na-agba asịrị mgbe niile, naanị ezumike ọ nwere bụ Baek Dowon, onye dibịa mgbaka ya. Mana ihe niile gbanwere mgbe Dowon dị omimi batara Hyeon n'ime ndụ nzuzo ya. N'ịbụ onye ịhụnanya Dowon na nke ebumpụta ụwa ya na-ebibi onwe ya, Hyeon na-abanye n'ime ụwa gbagọrọ agbagọ nke na-adọta ya nso na nsọtụ.
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ yaoi anime kacha mma
Emetụla m aka!
Akụkọ na-egbuke egbuke X-Mas Akụkọ 2003
Kamisama lsmụ bebi
yaoi anime kacha mma